အောင်မြင်မှု – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com Online courses marketplace in Burmese language. Becomeastudent, becomeateacher, learn Thu, 29 Nov 2018 07:26:45 +0000	en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.1.1 http://www.burmesehearts.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-SortingBurmeseNumbersA-32x32.png အောင်မြင်မှု – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com 32 32 အထီးကျန်မှုမှသည် အားသာချက်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%91%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%ba/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%91%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%ba/#respond Thu, 29 Nov 2018 07:21:01 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74788
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%91%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%81%e1%80%ba/feed/0တောင်ပေါ်ကမြင်ကွင်း တောင်ခြေကလူ ခံစားသိနိုင်ပါ့မလား http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%81%9a%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%81%9a%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84/#respond Thu, 29 Dec 2016 10:29:03 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73340
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%81%9a%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8-%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%ac%e1%80%84/feed/0ခံနိုင်ရည်အားကောင်းသော ကလေးငယ်များဖြစ်ဖို့ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%b6%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%b6%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac/#comments Wed, 18 Nov 2015 10:33:01 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=20049
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%81%e1%80%b6%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9b%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac/feed/2ကလေးသူငယ်များ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိကြဖို့ ထိန်းကျောင်းခြင်း http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9/#respond Tue, 17 Nov 2015 10:49:56 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=19858
ကလေးတွေရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ ပြုမူလုပ်ကိုင်ပုံတွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့ သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇ အရသော်လည်းကောင်း ၊ လူကြီးမိဘများရဲ့ မြေတောင်မြှောက်ပေး သင်ကြားဆုံးမပေးနိုင်မှုအပေါ်လည်းကောင်း စသဖြင့် အချက်အမျိုးမျိုးအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ကလေးငယ်တွေဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ ရဲရင့်သတ္တိနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်တယ်။ သူနားမလည် ၊ မသိတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်နေဦးတော့ လူကြီးနဲ့လည်း (၁၀)မိနစ်လောက်ကို အပြန်အလှန် ဗဟုသုတ ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။
သူတို့ဟာ ရဲရင့်သတ္တိရှိတယ်ဆိုပေမယ့် မိုက်ရူးရဲ တဇွတ်ထိုး မစဉ်းစားဘဲ လုပ်ကိုင်တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သူများပြောတာကို လူကြီးပြောတာပဲလေလို့ အလွယ်တကူ လက်ခံလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ချက်နဲ့လက်နဲ့ အကြောင်းအကျိုးခိုင်လုံအောင် စူးစမ်းမေးမြန်းပြီးမှ လက်ခံတတ်တာမျိုးပါ။ သူများခြောက်တိုင်းလည်း ကြောက်ရွံ့နောက်ဆုတ်သွားတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်သင့် ၊ မဖြစ်သင့် ၊ ဟုတ် ၊ မဟုတ်ဆိုတာကို ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံအောင် စဉ်းစားပြီးမှ နောက်ဆုတ်သင့်တယ်ဆို ဆုတ်သွားတာပါ။ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း တခါရှုံးနိမ့်ရုံနဲ့ လက်မြှောက်အရှုံးပေးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရှုံးကိုလက်သင့်ခံလို့ အနိုင်ပြန်ရအောင် ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတဲ့ကလေးဟာ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်သူပါ။
လူကြီးတွေဟာ ကလေးတွေမေးမြန်းတာကို စပ်စုတယ်လို့ ဆိုတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ စပ်စုတယ်ဆိုတာ မိမိနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် လူကြီးဘာပြောပြော ၊ ဘာလုပ်လုပ် အရာရာ လိုက်ဝင်ပါပြီး သိချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ စူးစမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ ဘာကြောင့်ဒီဟာ ဖြစ်သွားရတယ် ၊ ဘယ်လိုကြောင့် ၊ ဘာဖြစ်လို့ စသဖြင့် သူတို့နားမလည်သေးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ သူတို့စိတ်ထဲ ပုံဖော်နားလည်နိုင်တဲ့အထိ မေးမြန်းတတ်တာမျိုးပါ။ စူးစမ်းတတ်တဲ့ကလေးတွေဟာ စမ်းသပ်လိုစိတ်ရှိကြတယ်။ သူတို့ဟာ အရာရာတိုင်းကို စူးစမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သူတို့စိတ်ဝင်စားရာ အကြောင်းအရာတွေကို စူးစမ်းလေ့လာလို့ ပိုသိချင်တာမျိုးပါ။
စူးစမ်းတတ်တဲ့ ကလေးတွေကို သူတို့နားလည်လိုရာ အကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးပြောဆိုရှင်းပြခြင်းမျိုး မလုပ်တဲ့အပြင် စပ်စုလိုက်တာ ၊ ကလေးက ကလေးအရာမနေဘူးဆိုတဲ့ စကားနဲ့ သူတို့ရဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်ကို ပိတ်ပင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကလေးဟာ သူသိလိုတဲ့အကြောင်းအရာကို သိနားလည်အောင် မေးမြန်းဖို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါဟာ ဗူးသီးအမွှေးသပ်လိုက်သလိုပါပဲ။ ကလေးရဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်ကို ပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။ စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိမှ ဒီအကြောင်းအရာကို ပိုသိနားလည်အောင် လေ့လာလိုစိတ်ရှိမယ်။ လေ့လာရင်းနဲ့မှ စမ်းသပ်တီထွင်လိုစိတ်တွေကြောင့် စမ်းသပ်တီထွင်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကို အစကနဦးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့  စူးစမ်းမှုကို ပိတ်ပင်လိုက်မယ်ဆိုရင် မမေးရဲတဲ့ကလေးဟာ စမ်းသပ်တီထွင်လိုစိတ်ရှိဦးတော့ မဝံ့မရဲစိတ်တွေ ကြီးစိုးသွားခဲ့ပြီလေ။ ဒါဟာ လူကြီးမိဘ နဲ့ ဆရာသမားတွေ သတိထားရမယ့်ကိစ္စပါပဲ။
တခါတလေ ကလေးမေးတဲ့စကားလုံးတွေကို ကိုယ်တကယ် သိနားလည်မှု မရှိတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ယုတ်ယောင်ယောင် ရမ်းတုတ် ၊ ဖြီးထည့်လိုက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်မသိတာကို မသိဘူးလို့ အရိုးခံအတိုင်း ကလေးကို ဆက်ဆံပါ။ အဖြေမှန်ကို စာကြည့်တိုက်မှာဖြစ်ဖြစ် ၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် ကလေးနဲ့အတူ ရှာဖွေကြည့်ပါ။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကလေးဟာ သူသိလိုတဲ့ အဖြေမှန်ကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာကို သင်ယူသွားပါတယ်။ မသိတာကို မသိဘူးလို့ ဝန်ခံရဲတဲ့ ကိုယ့်ကိုလည်း လေးစားလာမယ်။
တခါတလေ ကလေးက ကိုယ့်ထက်ပိုသိပြီး ကိုယ်မသိတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ကလေးက ဆွေးနွေးလိုရင် သူပြောတာ နားထောင်လိုက်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် သူက ကိုယ့်ကို ပြန်သင်ခွင့် ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်ပေးတာဟာ ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ပါ။ ကလေးဟာ သူလေ့လာထားတဲ့ စာတွေ့ဟာတစ်မျိုး ၊ ကိုယ့်ကို ပြန်ပြောပြ ဆွေးနွေးလို့ သင်ပြခွင့်ရတဲ့ လက်တွေ့ကတစ်မျိုးနဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်မှာ အတွေ့အကြုံနှစ်ခု ဖြစ်ထွန်းသွားပါတယ်။ ကိုယ်လည်း ပညာရနိုင်တာပေါ့။ “ငါဟာ မိဘမို့ ငါသာကလေးကို သင်ရမယ်” ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီး သားသမီးနဲ့မိဘကြား မထားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်က မတူတော့ဘူးလေ။ ကိုယ်မသိသေးတဲ့အရာတွေကို သူဟာ လေ့လာသင်ယူရင်း သိနေနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ ကလေးကျတော့ တခုခုဆို မိခင်ရဲ့အနောက်မှာ ပုန်းကွယ်နေတတ်တာမျိုး ၊ ယှဉ်ပြိုင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ မဝံ့ရဲတာမျိုး ၊ သူများပြောလိုက်ရင် အယုံလွယ်လို့ လက်ခံလိုက်တာမျိုး ၊ သူများခြောက်တဲ့စကားတွေမှာ မျောပါ ကြောက်ရွံ့သွားတတ်တာမျိုး ၊ ရှေ့ဆက်လုပ်ကိုင်မယ့်အစား နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာမျိုး ၊ အရှုံးဆိုတာ မပေါ်လာခင်ကတည်း ငါရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီး အရှုံးနဲ့ကြုံပြီဆို လွယ်လွယ်စိတ်ဓါတ်ကျလို့ နှစ်ခါပြန်ရှုံးတတ်တာမျိုးတွေပါ။
ဒီလိုဆို ကလေးကို မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ မလေ့ကျင်ပေးသင့်ဘူးလား။ မိဘတိုင်းက ကိုယ့်ကလေးကို မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကလေး ဖြစ်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုက သူတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာဖို့ ဘယ်လို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးမလဲဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်မအကြိမ်ကြိမ်ဆိုခဲ့ဖူးသလို ကလေးမှာ ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာ ကိုယ်ကကအရင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာဖို့ဆိုရင် မိဘကိုယ်တိုင်က သူတို့ကို ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြသရမှာပါ။ မိဘဟာ သူတို့အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတယ်ဆို ကလေးဟာ အားတက်လာပါတယ်။ ပထမဆုံး ကလေးကို မိမိမျက်စိအောက် ခြေတလှမ်းအကွာလောက်ကနေ ယုံကြည်မှုပေးတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ စောင့်ကြည့်လို့ သူလုပ်ချင်ရာ လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။
နောက်တဆင့်က သူ့ကို မှန်ကန်တဲ့နည်းတဲ့ လုပ်ကိုင်တတ်အောင် ၊ သူလုပ်ကိုင်လိုတဲ့အရာ ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သွားအောင် နည်းလမ်းတကျ သွန်သင်ပြသလို့ သူ့ဘာသာ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရမှာပါ။ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတာ သူမအောင်မြင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ဖို့ အားပေးပြီး ထပ်ကြိုးစားချင်စိတ် ပေးရမှာပါ။ ဘာကြောင့် မအောင်မြင်နိုင်သေးလဲဆိုတာ အကောင်းဘက်က ထောက်ပြပြီး အမှန်က ဘယ်လိုလုပ်ရင် အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ နည်းပေးလိုက်ရမှာပါ။ ကလေး မအောင်မမြင် ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကို ပြက်ရယ်ပြုတာမျိုး ၊ မခံချင်အောင် ရှုံ့ချပြောဆိုတာမျိုး အထူးရှောင်ကြဉ်ရမှာပါ။
ကလေးဟာ သူသင်ခဲ့တဲ့ အသိလေး ၊ အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ သူ့ဘာသာလုပ်ကိုင်လို့ အောင်မြင်သွားရင် “ငါတကယ်လုပ်ဖို့ပဲလိုတာ ၊ ဇွဲရှိရှိလုပ်ကိုင်မှသာ အောင်မြင်မှုကို ခံစားရနိုင်တာ” လို့ နားလည်သွားပါတယ်။ ကလေးရဲ့အောင်မြင်မှုကို ကလေးနဲ့အတူ မိဘက ချီးမြှောက်ပြောဆို ဂုဏ်ပြုတာမျိုးတွေနဲ့ အောင်ပွဲခံပေးလိုက်ပါ။ ဒီအခါ ကလေးဟာ နောင်မှာ လုပ်ကိုင်ရဲလာမယ် ၊ လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့မှ အောင်မြင်လာပြီး သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှု ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ ကလေးဖြစ်လာပြီပေါ့။
အောင်မြင်နေတဲ့အနေအထားမှာ ငါတော် ၊ ငါတတ် ၊ ငါတကော ကောပြီး တခြားသူတွေကို မတူသလို ၊ မတန်သလို လုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီလူဟာ အကျနာတော့မှာပါ။ တချို့သော တော်လွန်းတဲ့ကလေးတွေဟာ တခြားကလေးတွေကို မတူသလို ၊ မတန်သလို ဆက်ဆံတတ်ကြတယ်နော်။ ဒါဟာ မိဘတွေရဲ့ သွန်သင်ဆုံးမမှု အများကြီးလိုပါတယ်။ ကလေးဟာ သူ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် သူ့ကိုယ်သူ ဘဝင်လိုလို ၊ အထာကိုင်သလိုလို ဖြစ်မသွားရလေအောင် မိဘဟာ သတိရှိရှိ ထိန်းကျောင်းရဦးမှာပါ။ ဘဝင်ကိုင်နေပြီး ထီမထင်နဲ့ မြောက်ကြွမြောက်ကြွ ဖြစ်နေရင် ဒီအောင်မြင်မှုမှာ သာယာနေပြီပေါ့။
အောင်မြင်မှုရသူတွေဟာ ဆက်လက်အားထုတ်လေ့လာရင်း ဆက်လက်ကြိုးစားတာမျိုး မလုပ်ရင် ဒီအောင်မြင်မှုတွေကို အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို လက်လွှတ်လိုက်ရမှာပါ။ ဒါကိုကောင်းကောင်း နားလည်ထားရင် အောင်မြင်တဲ့အနေအထားကနေ ပြန်ပြုတ်ကျမလာဖို့ ဆက်လက်အားထုတ်လေ့လာရင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်ကြိုးစားတာမျိုး လုပ်ရမှာပါ။ ဒါမှလည်း ရေရှည်မှာ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ်လေ။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ဇွဲ ၊ လုံ့လ ၊ ဝီရိယစိုက်ထုတ်လို့ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာ ကြိုးစားပါမှသာ အောင်မြင်မှုကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သူတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9/feed/0ဖြည့်စွက်သင့်သည့် မိဘဝတ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%90/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%90/#respond Wed, 01 Jul 2015 05:33:43 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=9467
ကိုယ်တိုင်မိဘနေရာရောက်လာတော့ မိဘတွေဖြည့်ပေးသင့်တဲ့ ကွက်လပ်တွေကို ပိုမြင်လာတယ်။ ကိုယ်ငယ်ငယ်က မခံစားခဲ့ရတာတွေ ၊ ခံစားခဲ့ရတာတွေ ပြန်ပြောင်းသတိရမိပြီး ငါ့ကလေးကိုတော့ ဒီလိုပြန်မခံစားစေရဘူး ၊ ငါ့ကလေးကိုတော့ ဒီလိုလေး ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ မြင်လာတဲ့နောက်မှာ အခြားကလေးငယ်တွေလည်း သူတို့မိဘတွေဆီက ဒါတွေရကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။
စားဝတ်နေရေးဖြည့်ဆည်းပေးရုံနဲ့ လူဖြစ်ခွင့်ရခြင်းဟာ မလုံလောက်ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်တွေပေါ့။ သူတို့ရဲ့ စကားပြောဖော်ဟာ သူတို့အနားရှိနေသူတွေပါ။ ဒီလူတွေကပဲ သူတို့ကို ပျော်ရွှင်မှု ၊ ဝမ်းနည်းမှုဆိုတာတွေ ပေးနေတာ။
နို့စို့ကလေးငယ်တွေရဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဟာ မိခင်ရင်ခွင်ထဲ နို့ချိုသောက်စို့ခွင့်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း နို့ဗူးတိုက်ကျွေးသူတွေအနေနဲ့ ကလေးကို ရင်ခွင်ထဲထားပြီး နို့ဗူးတိုက်ကျွေးကြဖို့ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေက အကြံပေးထားတယ်။ မိခင်ရင်ခွင်ထဲ နို့ချိုသောက်ဆို့ခွင့်ရတဲ့ကလေးဟာ မိခင်မျက်နှာကို မော့ကြည့်ရင်း ၊ မိခင်ကို ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ရင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံမှုဆိုတာကို ခံစားရတယ်။
မိခင်နို့ သောက်စို့ခွင့်ရတဲ့ကလေးတွေကတော့ ဘဝမှာရွေးချယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိရယ် ၊ မပူမပင်စိတ်အေးရတဲ့ အခြေအနေရယ် ပိုမိုရရှိစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိခင်နို့ သောက်စို့ခွင့်ရတဲ့ကလေးဟာ မိခင်ရဲ့ နို့တစ်ဘက်သောက်စို့နေချိန်မှာ နောက်တဖက်ကို ကိုင်ထားလေ့ရှိတယ်။ သူ့အသိစိတ်ထဲမှာ ဒါကုန်ရင် နောက်တစ်ခုရှိတယ် ၊ ဒါရိုးရင် နောက်တစ်ခုပြောင်းစို့လို့ရတယ်ဆိုတာ ဒီလိုကိုင်နေရင်းနဲ့ ခံစားနိုင်တယ်။
ဒီလိုယုံကြည်မှုမျိုး အခြေခံထားတဲ့ ကလေးဟာ ဘဝကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ ကလေးဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများတယ်။ ဘဝတလျောက်လုံး သူ့ရဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်ဟာ သူ့ကို လူကြီးမိဘတွေ ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲ ၊ ဘယ်သူက ဘယ်လို သင်ကြားပေးသလဲဆိုတာနဲ့လဲ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ကျောင်းနေကလေးအရွယ်ကနေ လူငယ် ၊ လူရွယ်တွေရဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်ဟာ လူကြီးမိဘက ချီးမြှောက်ပေးချိန်တွေပါ။ ချီးမြှောက်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ ကစားစရာဝယ်ပေးတာကနေအစ အဝတ်အစားအသစ် ၊ သူကြိုက်တတ်တဲ့ အစားအစာ ၊ အရွယ်နဲ့အတန်းအလိုက် လိုအပ်တာတွေ ပေးအပ်ခြင်းတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ ချီးမြှောက်ရုံလည်း မပြီးသေးဘူး ။ နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာကိုလည်း ပေးအပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ လိုလေသေးမရှိတဲ့ဘဝကို ရနေပါစေ နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာမခံစားရရင် ဘယ်လိုမှ မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူး။
ရုပ်ဝတ္ထုမပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေဟာ သားသမီးကို စိတ်အင်အားနဲ့ နားလည်မှုတွေ ပေးနိုင်တယ်။ သားသမီးနဲ့မိဘ အပြန်အလှန်နားလည်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေးရှိနေရင် မပြည့်စုံတဲ့ဘဝဟာ ပြီးပြည့်စုံနေသလိုပဲ ရောင့်ရဲနိုင်တယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကို ခံစားစေတယ်။
ကိုယ်တိုင်ကျရှုံးနေဦးတော့ သားသမီးရဲ့ မအောင်မြင်မှုကို နားလည်စွာဖေးမဖို့ ၊ အားပေးဖို့ ၊ စိတ်ဓါတ်မကျအောင် မြှင့်တင်ပေးဖို့ဟာ မိဘတွေမှာရှိသင့်တဲ့ အထူးတာဝန်ကြီးတစ်ရပ်ပါ။
အတန်းထဲအဆင့်ကျသွားလို့ ပြိုက်ဘက်ကိုလည်းရှုံးရ ၊ အတန်းထဲမှာလည်း အရှက်ရ ၊ အိမ်ရောက်တော့လည်း အဆူခံ ၊ အရိုက်ခံ ၊ အနှိမ်ခံရတဲ့ကလေးငယ်ဟာ ဘယ်လောက်စိတ်ဓါတ်ကျလိုက်မလဲ ။ မခံချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားအောင် ပြောတယ်ဆိုပေမယ့် ပြောတတ်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်။
အရွယ်ရောက်လာသူတစ်ဦးရဲ့ အပျော်ဆုံးအချိန်ဟာ ကိုယ်ချစ်သူနဲ့ တအိုးတအိမ်ထူထောင်နိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ပါ။ တအိုးတအိမ်ထူထောင်တယ်ဆိုတာ အပြောလွယ်ပေမယ့် အလုပ်ခက်လှတယ်။ ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုတွေကလွဲရင် လူလတ်တန်းစားနဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ကတော့ တအိုးတအိမ်ထူထောင်ခြင်းဆိုတာ တသက်တာရုန်းကန်ခြင်းပါပဲ ။ သားသမီးများများ မွေးထားတဲ့ ချို့တဲ့မိဘတွေအဖို့ရာ ကိုယ်တိုင်က ရုန်းကန်နေကြရတော့ ကိုယ့်သားသမီးတွေကို တအိုးတအိမ်ထူထောင်ပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ဒါကြောင့် ချို့တဲ့ရတဲ့အထဲ သားသမီးများတဲ့ မိဘတွေဟာ မိဘဝတ်တွေကျေနိုင်ဖို့ ပိုခဲယဉ်းပါတယ်။ ပြည့်စုံလွန်းတဲ့သူတွေကျပြန်တော့လည်း များမြောင်လှတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကြားမှာ သားသမီးကို ပေးနိုင်ဖို့အချိန် ရှားပါးလွန်းတာကြောင့် သားသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ နွေးထွေးမှု ရှားပါးနေတတ်ကြတယ်။ တချို့မိဘတွေကျပြန်တော့ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကြီးလာခဲ့တဲ့ ပုံသေဘဝဇတ်ခုံမှာ ကိုယ်ကြီးလာသလို ကိုယ့်သားသမီး ကြီးလာစေရင်း ဖြည့်စွက်ရမယ့်မိဘဝတ်တွေမှာ မကျေပွန်နိုင်တော့ဘူး။
ဖြည့်စွက်ရမယ့် မိဘဝတ်တွေထဲမှာ သားသမီးတွေကို နွေးထွေးမှုပေးဖို့ ၊ နားလည်ပေးဖို့ ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဖန်တီးပေးဖို့ ၊ ချီးမြှောက်ပေးဖို့ ၊ အားပေးတတ်ဖို့နဲ့ သားသမီးအပေါ် ချစ်နည်းမှန်ကြဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
တစ်ဦးတည်းမွေးထားတဲ့ သား သို့မဟုတ် သမီးအပေါ်မှာ သာမာန်မိဘဝတ်(၅)ရပ်အပြင် အဆိုပါ ဖြည့်စွက် မိဘဝတ်များ ကျေပွန်နိုင်ပါ့မလား သံသယရှိနေသူဟာ နောက်ထပ် သားသမီးတွေယူလိုက်ရင် ဝန်ပေါ်ဝန်ဆင့်ရင်း ကလေးတွေမှာ ဝန်ပိရော့မယ်လေ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%85%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%98%e1%80%9d%e1%80%90/feed/0အောင်မြင်မှုလမ်းစ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85/#respond Mon, 22 Jun 2015 07:59:47 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=9256
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%9c%e1%80%99%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85/feed/0လဲထလာသူများ၏ ပန်းတိုင် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9c%e1%80%b2%e1%80%91%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%81%8f-%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9c%e1%80%b2%e1%80%91%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%81%8f-%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9/#respond Tue, 09 Jun 2015 11:57:32 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=9101
လူအများစုသည် လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ အရွယ်တွင် လဲကျဖူးကြသည်။ လဲကျပြီးပြန်ထ၊ ပြန်ထပြီး ပြန်စမ်းလျှောက်ရင်းဖြင့် လမ်းကောင်းကောင်း လျှောက်တတ်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ ငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းက မလျှော့သော ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယတို့ ရှိထားနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မရှိပါက ကျွန်မတို့ ယခုလို ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး လမ်းလျှောက်တတ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်။ ပထမအကြိမ် လဲကျပြီးကတည်းက လက်မြှောက် အရှုံးပေးပြီး ပြန်ထလျှောက်ဖို့စိတ်ကူး ရှိမည်မဟုတ်။
ထိုသို့လဲကျ၍ ကြောက်လန့်ငိုပါက အနီးရှိသည့်လူက ချော့မော့ဖျောင်းဖျ၍ စိတ်သက်သာရလာသလို၊ အားပေးပြီး လမ်းကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်သည်ထိ တွဲထူသင်ပေးကြသူတွေလဲရှိသည်။ သို့ပေမယ့် မိမိချော်လဲကျသည်ကို ဟားတိုက်လှောင်ပြောင်သည့် လူကြီးများကို စိတ်ထဲကမုန်းသည်။ ရှက်လာသဖြင့် ပို၍အော်ဟစ်ငိုဖြစ်သည်။
ဒါက ကလေးဘ၀က ကျွန်မတို့၏ အကျင့်များဖြစ်သည်။ ထိုအတူ ကြီးပြင်းလာ၍ လောကဓံကို ခံလာရသော အရွယ်တွင်လည်း ကျရှုံးမှုများရှိပါက မိမိကို အားပေးမည့်သူကို တမ်းတသည်။ ချော့မော့ ဖျောင်းဖျတတ်သူကို သတိရသည်။ မိမိကို လောကဓံကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် လမ်းညွှန်သွန်သင်ပြနိုင်သူကို လိုလားသည်။ မိမိကျရှုံးမှုအား လှောင်ပြောင်ရှုံ့ချတတ်သူကို မုန်းသည်။ ဒီအတွက် ခံပြင်းသည်။
ဘယ်လိုခံစားမှုပဲရှိရှိ လဲရာမှာပဲ ထိုင်ငိုနေပါက ကိုယ့်အရှုံးလူပိုသိကာ ပိုအရှက်ရတာပဲအဖတ်တင်မည်။ မိမိငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းလျှောက်ရင်းလဲရင်း၊ ပြေးရင်းလဲရင်း ဖြစ်ခဲ့တာအခါခါ။ ဘယ်တုန်းကမှ ငါလမ်းမလျှောက်တော့ဘူးလို့ အတွေးမပ်ါခဲ့ပါဘူး။ ဒါက လူတိုင်း၏စိတ်ထဲက အလိုလိုရှိနေတဲ့ ဇွဲသတ္တိပါ။
လဲကျသွားတဲ့အခါ ငယ်တုန်းကတော့ငို၊ သိတတ်စမှာ ချွဲနွဲ့ပြီး ငိုကောင်းငိုပေမယ့်၊ အရွယ်ကြီးလာလေလေ ဒီလို လမ်းလျှောက်ရင်း လဲတာ၊ ပြေးရင်းလဲတာတွေကို စာမဖွဲ့တော့။ ဒါဟာ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောပါ။ ဒီလိုလျှောက်ရင်း လဲရင်း၊ ပြေးရင်း လဲရင်းနဲ့ မလဲအောင် ကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိန်းရမယ်။ မလဲအောင် ဘာတွေသတိထားရမယ်ဆိုတာ သိလာပါတယ်။ ဒါဟာ အတွေ့အကြုံတွေက သင်ခန်းစာယူပြီး သိလာသည့် ဘ၀အသိတွေပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူကြီးတွေလဲ သတိလက်လွတ်တဲ့အခါ၊ အခန့်မသင့်တဲ့အခါ လဲကျတတ်ကြပါတယ်။ လူကြီးဖြစ်ရင် ဘယ်တော့မှ မလဲတော့ဘူးဆိုတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဇွဲ၊ ဒီလိုသတ္တိနဲ့ လူတိုင်းလိုလို ကြီးပြင်းလာခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ ကြမ်းတမ်းတဲ့အခါ၊ လောကဓံကို ခံလာရတဲ့အခါ၊ ကျရှုံးမှုတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ ဘာကြောင့်များ ငယ်ငယ်က မလျှော့တဲ့ ဇွဲသတ္တိတွေ ပျောက်ကုန်ပါလိမ့်။ အတော်များများ ဘာကြောင့် လောကဓံတွေ၊ ဘ၀ စိန်ခေါ်မှုတွေကို သတ္တိရှိရှိ ရင်မဆိုင်ပဲ ၀မ်းနည်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျ၊ လက်မြှောက်အရှုံးပေးသွားကြတာလဲ။
တကယ်တော့ ကျွန်မတို့က အရွယ်ရောက်လာလေလေ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ၊ ဓလေ့ထုံးစံဆိုတာ၊ အရှက်တရားဆိုတာ၊ လူတွေရဲ့ အထင်အမြင်တွေကို ပိုပိုပြီး ဂရုစိုက်လာကြလို့ပါ။ ကျရှုံးမှုတွေ့ရပြီဆိုရင်၊ မှန်းထားတာတွေ ဖြစ်မလာရင်၊ ဆုံးရှုံးတာတွေများလာရင် လူတွေကဘယ်လိုထင်မလဲ၊ မိသားစုကဘာပြောမလဲ၊ မိတ်ဆွေတွေက၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေက စသဖြင့် ဘယ်သူဘာပြော၊ ဘာထင်မလဲဆိုတာ ပိုဂရုစိုက်လာကြတယ်။
ဒီအထင်အမြင်တွေ၊ လျှာဖျားကပြောစကားတွေကို ကြောက်လာကြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့ နယ်မြေမှာ စိတ်မလွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ ကြုံလာရတယ်။ နယ်ကျဉ်းလာတဲ့သဘော။ နေရထိုင်ရ ကျပ်လာတော့ နေရတာ မပျော်တော့ဘူး။ အဆင်မပြေလို့ စိတ်ဖိစီးတာတစ်မျိုး၊ ဘယ်သူဘာထင်၊ ဘာပြောမလဲဆိုတဲ့ မလုံတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကတစ်မျိုး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များပြီးရင်းများလာရတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများတော့ ထွက်ပေါက်ရှာလာကြတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ထွက်ပေါက်တွေ့ရင် မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်နိုင်ပေမယ့် မှားတဲ့ထွက်ပေါက်ကို မသိဘဲ (သို့မဟုတ်) သိရက်နဲ့ သွားနေပါက လမ်းမှားကြီးမှာ ဘ၀ရလာဒ်အမှားတွေ ရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မိမိ၏စိတ်က သူများတွေရဲ့ အထင်၊ အမြင်၊ အပြောတွေကို လိုတာထက် ဂရုစိုက်တတ်လို့ပါ။ မလဲကျခင်တုန်းကလဲ မိမိပဲလျှောက်ရတယ်။ လဲကျသွားတော့လဲ လမ်းလျှောက်တတ်အောင် မိမိလျှောက်မှပဲ မိမိလမ်းလျှောက်တတ်ခဲ့တာပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ မကျရှုံးခင်ကလဲ မိမိပဲလုပ်ရပြီး ကျရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကျနေတဲ့မိမိစိတ်ဓာတ် မိမိပဲဆွဲတင်ရမှာပါ။ သူများအကြည့်အောက်၊ အပြောအောက် စိတ်ဓာတ်ကျနေပါက မိမိစိတ်ဓာတ်ကို မိမိမှလွဲ၍ ဆွဲတင်ပေးနိုင်မည့်သူမရှိပါ။
သူများအပြော၊ အကြည့်တွေကိုပဲ တွေးဂရုစိုက်နေတော့ မိမိရှေ့ဆက် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဂရုတစိုက် စဉ်စားတွေးခေါ်မယ့်အချိန် နည်းသွားတယ်။ ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့တရုတ်စကားပုံကဆိုတယ်။ ပြဿနာဆိုတာ တစ်ခုတည်းပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့ အများကြီးတဲ့။ အရမ်းမှန်ပါတယ်။ အဓိကအရေးအကြီးဆုံး ပြဿနာက တစ်ခုတည်းပါ။ ဒီကမှတဆင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်လာတတ်တာပါ။ ဒီအဓိက ပြဿနာကို ဖြေရှင်းလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ဟာတွေကလဲ အလိုလို ပြေလည်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အဓိကပြဿနာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်းတတ်ဖို့က အရေးအကြီးအဆုံးပါ။ ဒီလိုဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေကလဲ စဉ်းစားရင် စဉ်းစားသလောက် ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ စဉ်းစားမိသလောက် ချရေးထားရင်ဖြင့် ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများစွာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီနည်းလမ်းတွေထဲကမှ အကောင်းဆုံးလို့ ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့နည်းလမ်း သုံးပြီး ဖြေရှင်းလိုက်ရုံပါပဲ။
ပြဿနာကိုပဲ အာရုံထားပြီး စိတ်ဓာတ်ကျ ခံစားနေတော့ ဒီပြဿနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို မစဉ်းစားဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ဒီပြဿနာဟာ အလိုလို သူ့ဟာသူရှင်းသွားမယ့် ပြဿနာမဟုတ်တော့ ပိုရှုပ်ထွေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေက အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ ပိုလို့ရှုပ်ထွေးလာတော့တယ်။ ဒီတော့ ဒီပြဿနာကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျပြီးရင်း ကျလာရတယ်။
အကောင်းဆုံးက ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအပေါ် အာရုံထားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုလျှော့ပြီး ဒီပြဿနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရင်အကောင်ဆုံးလဲလို့ အချိန်နဲ့အမျှ စဉ်းစားအဖြေရှာတာ အကောင်းဆုံးပါ။ ဒီတော့မှ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လမ်း နီးလာမှာပါ။ စဉ်းစားနေရုံနဲ့လဲ မပြီးဘဲ လက်တွေ့ကျကျ အကောင်းဆုံးလို့ ကိုယ်ယူဆထားတာတွေ၊ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလဲ လုပ်ကိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေ စဉ်းစားရင်း၊ ကြိုးစားဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတွေ လုပ်ကိုင်သွားတဲ့အခါ ဒီပြဿနာကိုပဲ အာရုံထားခံစားပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အချိန်တွေကလဲ လွတ်မြောက်မှာပါ။
လဲကျတဲ့နေရာမှာ စိတ်ဓာတ်ကျထိုင်နေရုံနဲ့ လိုချင်တဲ့ဟာကိုယ့်ရှေ့ သူ့အလိုလိုရောက်မလာသလို၊ ရောက်ချင်တဲ့နေရာလဲ သူ့အလိုလို ရောက်မသွားပါဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာကို ဘယ်လိုထိထိမိမိ ရအောင်ယူမလဲ၊ ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကို ရောက်အောင် ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာ သေချာစဉ်းစားပြီး လုပ်ကိုင်သွားမှ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြည့်လာမှာပါ။ ဆန္ဒဆိုတာ တကယ်ပြင်းပြရင် ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာမယ့် နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မသိတတ်စဉ် ငယ်ငယ်ကတည်းက အကြိမ်ကြိမ်လဲရာက ထလာပြီး အခုချိန်ထိ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်နိုင်ရင် ဘာကြောင့် ဒီကျရှုံးမှုကို ရှက်ရွံ့တုန်လှုပ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေမှာလဲ။ ချီးမွမ်း ကဲ့ရဲ့ ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ချင်ကြတဲ့ လူတွေစကားအောက် ဘာကြောင့်မှောက်နေမှာလဲ။ ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရတဲ့ဘ၀ထဲ ကိုယ်တကယ်ရချင်တယ်ဆို ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိဖို့၊ သိလာတဲ့ဟာ အောင်မြင်တဲ့အထိ ကြိုးစားလုပ်သွားဖို့ပဲလိုတာပါ။ လူတိုင်း တခဏတာတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဇွဲရှိရှိဖြတ်ကျော်ပြီး အောင်မြင်မှုပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း …….
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9c%e1%80%b2%e1%80%91%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%81%8f-%e1%80%95%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9/feed/0သတ္တိ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%81%b1%e1%80%ad/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%81%b1%e1%80%ad/#respond Sun, 07 Jun 2015 05:25:24 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=9045
ဒီလိုသိရင်းကပဲ ဆထက်တပိုး ငါကြိုးစားတယ်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%90%e1%81%b1%e1%80%ad/feed/ 0